Home SOUTH AMERICA FOOTBALL ụmụaka Joel Campbell Nwatakịrị Akụkọ Akụkọ nke Na-emeghe Ihe Akụkọ
LB na-egosi Full Story of a Football Genius kasị mara aha; "Black akukonta". Joel Campbell Ụmụaka Akụkọ anyị na-agbakwụnye akụkọ na-enweghị isi akụkọ Eziokwu na-ewetara gị akụkọ zuru oke nke ihe ndị a ma ama site n'oge ọ bụ nwata ruo n'oge. Nyocha a na-agụnye akụkọ ndụ ya tupu ama aha ya, ịhụnanya ndụ, ndụ ezinụlọ ya na ọtụtụ ihe na-emeghị ka ọ mara banyere ya.
Ee, onye ọ bụla maara banyere ya na-akụda ọgụgụ isi na 2014 World Cup. Otú ọ dị, ọ bụ nanị aka ole na ole maara banyere Joel Campbell's Bio nke bụ ihe na-akpali mmasị. Ugbu a n'enweghi adieu ọzọ, ka anyi bido.
Joel Campbell Nwatakịrị akụkọ akụkọ na -Ndụ mbido
Joel Nathaniel Campbell Samuel mụrụ na 26th ụbọchị nke June 1992, nne ya, Roxana Samuels na nna, Humberto Campbell na San José, Costa Rica.
Ndị nne na nna dị ka agbadoro n'okpuru ebe a bụ ndị na-agba ụkwụ na mbụ bụ ndị maara ibe ha ma nwee ịhụnanya maka egwuregwu mara mma nke na-eme ka ha gbakọta.
Mgbe Humberto Campbell na Roxana Samuels mụrụ nwa nke atọ n'ime ụmụ anọ ha (Joel), mkpụrụ ndụ nke football na-agbanye n'ime mkpịsị aka nke Doña Roxana, maka otu ihe kpatara ya. A mụrụ nwa ha nwoke a hụrụ n'anya, bụ Joel Campbell dị ka ọgbọ ise ọgbọ ndị ezinụlọ nke Roxana Samuels bụ ndị na-anọchite anya ọgbọ 4th nke agbụrụ football football. Roxana Samuels (Joel Campbell's mum) bụ isi ihe mere football ji dịrị na DNA nke nwa ya nwoke. N'oge a, a kpọrọ ya Pelela, na-atụgharị anya, n'ezie, ka akụkọ ifo Brazil Edson Arantes Do Nascimento, Pelé. O weere nza nke ihe mgbaru ọsọ dika Pele n'oge ya.
Roxana, na-emesi ike na Joel nwa ya gụrụ akwụkwọ na football site na akpa nwa ya nke o kụrụ ụkwụ. O kwukwara na mgbe a mụrụ ya, ọbụna mgbe ọ na-enweghị ike ikwu okwu mbụ ya, Joel maararịrị otú ọ ga-esi jiri amụmụ ọnụ ọchị ma jidesie ya ike. Ikike ya na-amụmụ ọnụ ọchị mgbe nile bụ àgwà ọma Joel na ụmụnne ya, Junior Humberto, Katherine na Nekisha, ketara n'aka Don Humberto, nna ha. Ndị nne na nna abụọ bụ Ndị Kraịst nwere obi umeala ma zụlite ụmụ ha ka ha dị ka ha. Campbell toro na ụmụnne ya atọ (aha ndị a kpọtụrụ aha n'elu).
Joel Campbell Nwatakịrị akụkọ akụkọ na -Nchịkọta Ọrụ
Dị ka nwa nke òtù football, bọl bụ mgbe nile bụ akụkụ dị mkpa nke DNA ya. Ọ bụ ụdị ahụ ọkụ ahụ site na nwa okorobịa bụ Joel nwere bọọlụ abụọ. E nwere bọmbụ nwere nchebe nke ọ na-edebe nanị ma ọ bụrụ na onye nke ọzọ gbaga n'uko ụlọ ma ọ bụ n'ime ogige ụfọdụ ndị agbata obi na-enweghị obi ụtọ bụ ndị ga-ajụ ịlọghachi ya na bọl ahụ. N'oge a, Joel Campbell dị afọ anọ.
Campbell's football Gene gosipụtara n'oge ọ bụ nwata. Humberto, nna ya mere ka ọ dị mkpa maka Campbell n'oge ọ bụ nwata ịmalite ịzụlite ụkpụrụ ntụrụndụ dị ka ịdọ aka ná ntị na nraranye. N'ịbụ ndị na-esi n'aka mmetụta ndị nne na nna, ịga ụlọ akwụkwọ nyeere Campbell aka inwe ezigbo ntọala n'ọrụ ya. N'oge ahụ, ya Ụlọ akwụkwọ nyere ya ohere iji mmasị na-egwu egwuregwu bọl n'egwuregwu n'oge egwuregwu. Nke a mere ka mkpebi ya kpebisie ike 'Football' dị egwu dị ka a hụrụ na a trophy oge foto n'okpuru.
Joel nwere mkpebi siri ike ime ka nrọ ya mezuo, ọchịchọ ya abụghịkwa ihe na-agafe agafe. Campbell malitere na Saprissa, otu ụlọ ọrụ Costa Rican nke aha ya bụ "Carajillos nke Valencia"Na San Rafael Abajo de Desamparados. N'oge ahụ, ndị nkụzi nke nwere ya n'oge ọ bụ nwata, kọwaa ya dị ka onye na-ebu ọnụ ngwa ngwa na ikike dị ukwuu iji jide ndị iro ya. Ọ nwekwara ezigbo nkà ịgba ụta, ọ dịkwa mma. Joel Campbell kwụsịrị ntorobịa ntorobịa ya dị ka onye nọ n'afọ iri na ụma.
Mgbe ọ gụchara ọrụ ntorobịa ya, ọ bụ naanị Joel ka ọhụụ abụọ dị n'ihu ndị na-agba afa na-agbagharị gburugburu obodo ahụ hụrụ ya. O kwuru na ya agbaghala Sevilla na Fiorentina ka ha banye na Gunners.
N'agbanyeghị na ọ na-aga na ndị Gunners si Saprissa na 2011, onye na-egbu egwuregwu aghaghị ichere afọ ise tupu ya abanye n'egwuregwu mbụ maka ihe ngosi 2014 World Cup. Ọ ka na-enwe ọṅụ na-egwuri egwu maka usoro klọb dị iche iche ma hapụ ịhapụ Arsenal ọzọ. Football ghọrọ osisi ọlaedo maka Campbell, egwuregwu ebe ọ hụrụ mmezu. Ndị ọzọ, dị ka ha na-ekwu, bụ akụkọ ihe mere eme ugbu a.
Joel Campbell Nwatakịrị akụkọ akụkọ na -Ndụ mmekọrịta
Ruo mgbe ọ bụ nwata, Joel aghọwo onye a ma ama na Costarican nke ọma n'ihi ngosipụta dị oke egwu ya. Ikike ya na ikike ya, nakwa ụdị ndụ ya na nkwụsị ahụ, wulite ya n'ụzọ zuru ezu. Eziokwu bụ, Joel Campbell hụrụ mma n'anya ma jiri oge ya mee ihe kacha mma maka obi ya.
Joel hụrụ ịhụnanya na Maria Fernanda Cascante bụ onye mechara bụrụ onye kacha mma ya. Mmekọrịta ha na-eto site n'ọnọdụ kasị mma n'ịhụnanya nkịtị.
Ozugbo o zutere Fernanda mara mma, Ọ dịtụghị mgbe Joel Campbell bịara mara nne na nna ya nyere ha ngọzi, nkwado na ndụmọdụ mmekọrịta.
Joel Campbell dere Fernanda maka afọ 8 na ịhụnanya ha na-eduzi na ha nwere ike ijikọta onwe ha ma n'oge ọma ma sie ike.
Mgbe ha kwusịrị afọ 8th nke mmekọrịta ha, nkwenye alụmdi na nwunye bịara. Emere agbamakwụkwọ ha na Iglesia de Pozos, de Santa Ana na Costa Rica na June 2017.
Ndị agbụrụ Costa Rican na-aga agbamakwụkwọ ahụ Yeltsin Tejeda, Bryan Ruiz, na Keylor Navas. Joel Campbell nwere ezigbo ndụ di na nwunye dịka o gosipụtara mgbe ọ na-echeta ime ime nwunye ya na foto dị n'okpuru ebe a.
Fernanda mụrụ nwa agbọghọ mara mma nke di na nwunye aha ya bụ Brianna Campbell. Ọ ka na-abụ onye mbụ na nwata nanị dịka ederede. Joel dị ka ọ dị n'okpuru ebe a bụ mmasị Brianna Campbell, nwa ya nwanyị mara mma.
Joel Campbell nwere mmetụta uche ma nwee nlezianya, na-echebara ihe gbasara ezinụlọ na ụlọ ha anya.
Joel Campbell, nwunye ya na nwa ya nwanyị mara mma na-enwe mmasị ịga ezumike gaa n'ebe dị iche iche mara mma.
Inwe nwunye mara mma na nwa ewu mara mma na-eme ka Campbell gbanwee ka ọ ka mma, si otú ahụ na-abịaru Chineke nso. Joel hụrụ nwunye, nne ya na nwa ya nwanyị dịka ogidi nke abụọ ná ndụ ya, nke mbụ bụ Chineke.
Roxana Samuels, nne Joel, kpughere na n'ihu egwuregwu ọ bụla, nwa ya gụrụ Abụ Ọma 27. O doro anya, omume a malitere dịka nkwenye site na nwunye ya na nne ya. Ọ bụ otu ụzọ Campbell si enweta nkwenye maka ọrụ ya.
Abụ Ọma 27 na-ekwu; The Jehova bụ ìhè m na nzọpụta m; ònye ka m'gētu egwu? Jehova bu ike nke ndum; ònye ka m'gātu egwu?
2 Mgbe ndị na-emebi iwu, ọbụna ndị iro m na ndị iro m, bịakwutere m iri anụ m, ha sụrụ ngọngọ wee daa.
"Gaa Leta Bible Ka I Nweta Ezumike!"
Joel Campbell Nwatakịrị akụkọ akụkọ na -Ndụ Ezinụlọ
Ndị mụrụ ya: "Ezinụlọ Humberto bụ obi ụtọ", ka Doña Roxana, bụ nne nke ụlọ, na-ekwu. Ọ dị mkpa ịmara na Humberto bụ onye bụbu onye na-elekọta ndị na-elekọta egwuregwu football ugbu a bụ Seaman mgbe nwunye ya (Joel Campbell's mum) bụ onye na-agba ọsọ ezumike nká.
Ezinụlọ Campbell nwere nkwupụta na ha ekwesịghị inwe anyaụfụ ma ọ bụ ihe ọ bụla. "Ndị niile nwere otu ọnọdụ ahụ, hà nhata," ekwu na nna nke a na-ese onyinyo na-ele anya na nwa ya nwoke na-agba bọl.
Ihe gbasara nne mama Joel Campbell: Joel Campbell nne, onye nke ochie na-arụ ọrụ ya na Red Stars nke Atlantic nke bụkwa otu nwanyị nke di ya na-eduzi tupu ha achọta ibe ha ma nwee ịhụnanya. Roxana na nwa ya bụ Campbell dị nso. A na-agba akaebe na nkwupụta ya n'okpuru ebe a.
Dona Roxana kwupụtara nke a ozugbo: "Akpọrọ m Joel mgbe nile na ohiri isi mgbe ọ bụ nwa ọhụrụ. Ruo ụbọchị, Joel ka nwere ohiri isi dị nso ya. Ọ na-eburu ya ebe ọ bụla ọ na-aga, dịka ihe dị egwu. Otu ohiri isi! "
Ụmụnne: "Ọ bụ onye ọkpụkpọ mara ọ bụghị nanị maka ihe ndị ọ rụzuru n'egwuregwu ma maka ike ya na mmekọrịta ya na ụmụnne ya," " kwuru Michel, nwa nwanne nna ya. Joel Campbell dị ngwa inyere ndị ọzọ aka, dị nnọọ ka ọ dịkwa ngwa izere esemokwu na ndị ikwu ya na ndị enyi ya ndị na-enwe ya anyaụfụ.
Joel Campbell Nwatakịrị akụkọ akụkọ na -Eziokwu nke Onye
Joel Campbell hụrụ ịnyịnya n'anya kama ọ na-atụ egwu ịnyagharị otu.
Campbell na-ebi ezigbo ndụ nke anyị nwere ike ịmata site n'aka Instagram ọrụ ya. Ọ nwere ụlọ ọrụ isi ụlọ nke ya.
N'ịbụ ndị na-aga ịnya ụgbọ ala dị iche iche, Joel Campbell bụ ezigbo ezigbo enyi ya.
Banyere ya Ike, Campbell bụ Ezi uche, na-eguzosi ike n'ihe, mmetụta uche na ọmịiko.
Banyere ya N'ihe omume ntụrụndụ, Campbell ama ama Art, ihe omume ntụrụndụ nke obibi, na-ehi ụra nso ma ọ bụ na mmiri, na-enyere ndị a hụrụ n'anya (karịsịa ndị nne na nna na ụmụnne) aka, na ịrara oge ya ohere na desktọọpụ ya n'ụlọ. Ozi mgbasa ozi na-ekwu na ọ bụ nwa akwụkwọ na usoro ntanetịime University.
Ihe Joel Campbell choro: Ndị mba ọzọ, nkatọ ọ bụla banyere mama ya na ịhapụ ihe ọmụma gbasara ndụ ya.
Joel Campbell Nwatakịrị akụkọ akụkọ na -Eziokwu
Campbell bụ onye na-akpa àgwà. Ọ na-azụta akwụkwọ 100 ka ọ mara onwe ya. N'ụzọ dị mwute, ọ bụghị.
Ọ na-eji obi ụtọ na-eme ihe mgbaru ọsọ ya dị ka ụzọ isi kọọrọ ụmụ nwanne ya. Nke a na-esochi ememme amara dị ka e sere n'okpuru.
Nyochaa: Daalụ maka ịgụ akwụkwọ anyị Joel Campbell Childhood akụkọ na akụkọ eziokwu dị oke ọnụ. Na LifeBogger, anyị na-agbasi mbọ ike maka izi ezi na ịdị mma. Ọ bụrụ na ị hụ ihe na-adịghị ele anya na isiokwu a, biko tinye okwu gị ma ọ bụ kpọtụrụ anyị !.